प्रधानमन्त्रीको लागि लडिएको होईन् जनताको लागि हो: प्रचण्ड – yuwa Awaj
माघ २५, २०७७ आइतबार 5
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूहरुले पदको लागि आ,न्दोलन वा संघर्ष नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा ल,डेर ल्याएका परिवर्तन र संविधानमाथि प्रहार गरेकोले त्यो जोगाउनको लागि आ,न्दोलन गरेको स्पष्ट पारेका छन् । आज मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले–‘हामी प्रधानमन्त्रीको लागि लडिएको होईन् । तपाईहरुलाई त्यस्तो लागेको छ भने ठूलो गल्ती हुनेछ । संविधान बचाउने, परिवर्तन जोगाउने चिन्ता हो । हामी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र नागरिक समाज ओलीको प्रतिगमनको वि,रोधमा छौं ।’
सरकारलाई काम गर्न दिईएन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको आ,रोपमा कुनै सत्या नरहेको पनि उनले जि,किर गरे । उनले भने,‘कसैले देखाउन सक्छ ? नीति तथा कार्यक्रम फेल गर्न खोज्यौं ? कुन कुरामा बा,धा पुर¥यायौं ? उहाँले जे मन लाग्यो, त्यही गर्दै जाने अनि हामीले हेर्दै जाने त हुन सक्दैन् । गणतन्त्रप्रति उहाँको मन थिएन । संघीयत पनि उहाँलाई मन परेको थिएन । न सचिवालय, न स्थायी कमिटी, न केन्द्रीय कमिटी, न संसद कतै उहाँको बहुमत छैन् । लोकतन्त्र भनेको बहुमत हो । अल्पमत प्रतिपक्ष हो ।
बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ । यो एलायन्सका सबै अधिकारीहरुसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ–अहिलेको संघर्ष भनेको सत्य र असत्यको संघर्ष हो । कित्ता क्लियर गर्नैपर्यो । मिडिया विद्येयक हामीले वि,रोध गर्यौं । तपाईँहरुले पनि वि,रोध गर्नुभयो । गुठी विद्येयक ल्याउँदापनि सल्लाह भएन । नेवार समूदायका सबै संस्थाहरु पार्टी र सरकारवि,रुद्ध उत्रिए ।’
Prevबादललाई वर्षमानको काउण्टर: चिडिया खानामा थुन्ने ध,म्की नदिनुस्, जनताले गल्लीमा घिसार्छन् !
Nextसंयुक्त आन्दोलन गरे ओली सरकार एक हप्तामा ढल्छ : बाबुराम भट्टराई